Tsaho momba ny vaksinin’ny pesta Tovolahy iray nidoboka eny Antanimora
Houcine Arfa “Nandoa 70 000 euros tamin’ny minisitry ny fitsarana aho”
Araka ny efa nambarany dia niroso amin’ny ampamoaka amin’izay ilay teratany Frantsay Houcine Arfa , efa nigadra teny Tsiafahy, tafatsoaka an’i Madagasikara, nihazo ny nosy Mayotte ary efa any Frantsa kosa amin’izao fotoana.
Boriborintany faha-2 Misy mitady hanakorontana
Omaly alatsinainy 15 janoary 2018 dia nisy ampahany tamin’ireo mpiasa eo anivon’ny Boriborintany faharoa (Ambanidia) ao anatin’ny kaominina Antananarivo nametraka sorabaventy mitaky ny fialan’ny delege Andriamatoa Jacques Razafindraibe.
Mpivarotra amoron-dalana Nomena fampitandremana farany
Mitohy sy mihamafy hatrany ny asa fanadiovana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra, raha ny vaovao voaray avy eo anivon’ny fiadidiana ny tanàna.
Avaratetezana Ampitatafika Lasan’ny Sinoa indray ny tany
Tsy mety tapitra ny ady tany ao amin’ny fokontany Avaratetezana Ampitatafika, kaominina Ampitatafika,
Tovovavy 14 taona niala tao an-tranony Tsy hita popoka izay misy azy
Tovovavy kely iray vao 14 taona antsoina hoe Razafindrahanta Hariniriantsoa Nancy monina eny Avaradoha no tsy hita popoka nanomboka ny sabotsy 13 janoary lasa teo tamin’ny 4 ora nialany tao an-tranony.
Rajaonarimampianina Hanao asa maro any amin’ny faritra Zafimaniry
Ny faritra misy ny mponina Zafimaniry no toerana nanombohan’ny filoham-pirenena ny fitsidihana ofisialy ivelan’ny renivohitra tamin’ity taona 2018 ity.
Manomboka ahitam-bokany ny fikarohana ireo atidoha nikotrika ny asa fanakorontanana tena nahomby teto Antananarivo ny herinandro lasa teo, indrindra ny alakamisy 10 novambra, izay nampisahotaka ny renivohitra manontolo.
Ny fisian’ny andian’olona nambara fa manao vaksinin’ny pesta ary mitety sekoly miaraka amina andiana mpitandro ny filaminana io niteraka korontana io. Voasambotry ny polisy misahana ny heloka bevava ny tovolahy iray 24 taona, skoto, anisan’ny tompon’antoka tamin’ny fanapariahana tsaho tamin’ny tsaho tambajotra « facebook ». Niaiky ny heloka vitany izy. Nandritra ny fanadihadiana azy no nilazany fa zavatra noforonina nolaroiny ny trangan-javatra hitany tetsy sy teroa ireny, ary navoakany mba hanaitra ny rehetra fotsiny ihany. Niala tsiny tamin’ny tebiteby sy fikorontanana nahazo ny ray aman-dreny vokatry ny zavatra tsy marina navoakany izy nandritra ny fakana am-bavany azy teny amin’ny polisy. Taorian’ny fanadihadiana dia nidoboka vonjimaika eny Antanimora ny tenany miandry ny fitsarana azy. Anatra ho an’ny rehetra izao, ary azo handrefesana tsara ny mety ho voka-dratsin’ny fanokorontanana amin’ny alalan’ny fanelezana tsaho. Mbola mampitandrina hatrany ny mpitandro ny filaminana manoloana ireo mpikirakira ny tambajotra sosialy izay minia manaparitaka vaovao diso sy mampisavorovoro ny saim-bahoaka. Tsara ny manamarika fa efa manana fitaovana raitra hahafahana mamantatra ny fitaovana sy toerana hiaingan’ny vaovao tsy marina ny mpitandro ny filaminana.